I-CallClear, usetyenziso lokucima iifowuni ngokukodwa | IPhone iindaba
iberllin | | Ezahlukeneyo
CacisaSisicelo esitshintshe igama laso ngo-Matshi ukusukela oko sasibizwa ngokuba yi-iCallBR ngaphambili kwaye sisebenza ekupheliseni iifowuni eziphosiweyo, ezifunyenweyo okanye ezisandula kuthunyelwa.
Namhlanje ihlaziyiwe kwinguqulelo 2.4 kwaye ukuze ube nokuyifaka kufuneka ukuba uyenzile Jailbreak kwi-iPhone.
Ukusebenza kwayo kulula kakhulu:
Xa sivula usetyenziso, uluhlu luya kuvela olunamagama okanye iinombolo zeefowuni, kuxhomekeke kwinto esiyikhethileyo kwimenyu yebar: Konke (Zonke iifowuni), Ephumayo (ephumayo), Ukuqala (Ungenayo) okanye Ilahleko (Ulahlekile).
Ukuba sicofa kulo naliphi na igama okanye inombolo ebonakalayo, kuya kuvula isikrini esitsha esiya kuthi sikunike ithuba lokukhetha «Cima loo fowuni kuphela» okanye enye "Cima yonke iminxeba enenombolo".
Ukuba sicinezela «Cima», Kwicala lasekhohlo legama ngalinye okanye inombolo yefowuni, kuya kuvela i icon ebomvu encinci enophawu lokumisa, ethi xa icofiwe, ijike ngokuthe nkqo kwaye isinike ithuba lokuyicima (Cima).
ICallClear ikwiinguqulelo ezimbini enye simahla Oko kunemiqobo ethile kunye nenye intlawulo ye- 2,99 $, ukukwazi ukukhuphela kwi Cydia e obandayo ngokugcina Ubhosi omkulu.
Ukuba ufuna ukubona ngaphezulu kwesicelo, nantsi ifayile ye- iphepha elisemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-CallClear, isicelo sokucima iifowuni ngokukodwa
Ndicela ukuba ndibhalise isicelo
Isicelo simahla, okwenzekayo kukuba kukho umsebenzi ukuze usebenze kufuneka ubhalise kwaye uhlawule i-2.99 euro:
Kwenye yeefoto ifundeka ngombala obomvu ukuba kufuneka ubhalise ukuze ikusebenzele.
Kwezinye iifoto ukuba ujike ngaphezulu ungafunda uhlobo olungabhaliswanga, kodwa ukuba luyasebenza kunye nokucima
Yayifakwe, kodwa ifuna ikhowudi yokuvula, ayikhululekile
Ndiyithenge kakuhle kodwa nge-4.0 ayisebenzi ayizukuba le nkqubo ihlaziywa
ICallclear isebenza kum ngokugqibeleleyo! Enkosi, bendikhangela inkqubo enjalo yexesha le-loooong 🙂
Ayisebenzi nge-iOS 4.3.1 kwii-3Gs, xa inikwe ukucima umnxeba ayenzi nto.
Andazi ukuba ndiyikhuphele njani le program kwi-iphone yam, mhlawumbi kukho umntu onokuthi achaze ukuba ungayenza njani? Enkosi
Yithi graça é mais gostoso, iqela labanye
Ngaba kuyinyani ukuba kukho iifowuni apho ilog yakho yokufowuna inokhetho lokususa zonke iifowuni ngokuthe ngqo ngaphandle kokukwazi ukukhetha nganye nganye? Kule meko kwenzeka kuphela nge-IPhone?
Molo, besele ndiyifakile, kodwa kwi-clearcall ukuba iifowuni ziyacinywa, kwaye kuthekani ngezinye ukusuka apho kubonakala ngathi nam ndiyazicima azicinywanga ????
Iintsuku zokuzalwa, isicelo sokugcina umhla wokuzalwa kwabafowunelwa bethu